HomeEngland Arsenal Oo Sii Xajisatay Kaalinta 4-aad Kabahana La Dulmartay Hull City
Arsenal ayaa sii xajisatay booskeeda kaalinta afaraad ee kala sareynta horyaalka ka dib markii ay 3-0 ku dubteen kooxda Hull City oo marti loogu ahaa KC Stadium iyadoo xiddigooda khadka dhexe Aaron Ramsey uu wacdarro dhigay.
Mesut Ozil ayaa kulankan ku soo laabtay Arsenal iyadoo ciyaarta ay ku bilaabay qalad uu ka badbaaday goolhaye Szczesny kaasoo cadaadis uu ku jiray ka dib iska bixiyay kubad ka timid Shane Long.
Waxooga qosol ayaa garoonka ka dhacay 10 daqiiqo oo ay ciyaarta socotay markii borarka xayaysiinta ku wareegay garoonka lagu ciyaaro ay soo tuurtay dabeyl xoog badan iyadoo shaqaalaha garoonka ay ka howlgaleen si ay u uruuriyaan waxaana caawinayay hal ama labo ciyaaryahan.
Rubuc saac markii ay socotay ciyaarta Arsenal ayaa ku dooday rigoore markii Ahmed Almohamady uu qalad ku galay Mesut Ozil laakiin garsoore Jon Moss ayaa tilmaamay inaysan gool ku laad aheyn.
Maanta Mikel Arteta uma aheyn maalintiisa. Marka hore garsooraha ayaa seegay lug kore oo uu Tom Huddlestone u qaaday ciyaaryahanka khadka dhexe, ka dib xiddiga reer Spain ayaa ilik ay ka dhacday markii ay isku dhaceen David Meyler.
Daqiiqadii 31aad ayayna Arsenal hogaanka u qabatay ciyaarta iyadoo Aaron Ramsey uu la soo laabtay gool. Dhismaha goolka ayaana ahaa mid aad u qurux badan Mesut Ozil ayaa quudiyay Santi Cazorla kaasoo isna kubada u dhigay Ramsey, xiddiga reer Wales ayaana si tartiib ah ku hareermariyay goolhaye Steve Harper.
Shan daqiiqo ka dib waxaa Arsenal ka naxsaday xiddiga Hull ee amaahda uga soo maqan Tottenham Jake Livermore kaasoo birta u garaacay.
Arsenal ayaana goolka labaad xaqiijisatay wax yar ka hor dhamaadkii qeybta hore, waxaana goolka uu ku yimid si qiimo leh. Hull ayaa aamineysay in loo dhigo laad xor ah, laakiin Arsenal ayaa kubada la carartay, Olivier Giroud ayaa karoos weyn ka soo dhigay dhanka midig, waxaa xabadka ku koontaroolay Aaron Ramsey kaasoo u dhigay Lukas Podolski oo isna shabaqa cusjiyay.
Waxaana qeybtii hore ee ku dhamaatay 2-0 oo ay hogaanka ku heysay Arsenal iyo iyadoo taageerayaasha Hull ay ku oorinayeen garsoore Jon Moss si ay u tusiyeen dareenkooda ku aadan goolka labaad ee Gunners.
Sagaal daqiiqo markii ay socotay qeybta labaad ayayna Arsenal heshay goolkeeda seddexaad, waxaana mar kale u saxiixay Lukas Podolski, waxaana mar kale ka danbeeyay Aaro Ramsey oo nafta ku soo celiyay khadka dhexe ee Arsenal iyadoo kubad uu ku tuuray Steve Harper oo soo laabatay uu dhaliyay Podolski.
Arsenal ayaana ku dhawaatay goolka afaraad markii goolhaye Steve Harper uu khalkhalay iyadoo Olivier Giroud uu kubada la dhaafay goolhayaha laakiin kubadiisa waxaa soo celisay birta.
Balotelli: Waxaan Doonayaa Inaan 40 Gool Dhaliyo Xili Ciyaareedkii
War Qosol Badan: Xanjo uu cunayay Tababare Jürgen Klopp Oo lagu qiimeeyay 150-Euro
22/04/2014 Khadar Dirir